आइतबार , असार ६, २०७८
| ५:२०:१९ मा प्रकाशित
वि.सं.२०७८ साल जेठ ०४ गते मंगलबार । ईश्वी सन् २०२१ मे १८ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । बैशाख शुक्लपक्ष । तिथि– षष्ठी,०८ बजेर ०४ मिनेट उप्रान्त सप्तमी । नक्षत्र– तिष्य,११ बजेर ०२ मिनेट उप्रान्त अश्लेषा । योग–बृद्धि,२२ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त ध्रुव । करण– तैतिल, ०८ बजेर ०४ मिनेट उप्रान्त गर,२० बजेर ०३ मिनेट उप्रान्त वणिज । आनन्दादिमा–प्रवद्र्ध योग । चन्द्रराशि–कर्कट । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर १५ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ४६ मिनेट । दिनमान ३३ घडी ४८ पला । गंङ्गोत्पति, गंङ्गासप्तमी ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) :- राजनीति तथा समाजसेवामा परिश्रम गरे अनुसार पद प्रतिष्ठा पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानि गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने पतिपत्नीबीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) :- गन्तब्यबिहिन यात्राले समस्या निम्तिन सक्छ ध्यान लिनुहोला । व्यवसायिक यात्रा हुने भएपनि उपलब्धी न्यून हुनेछ । आफन्त तथा दाजुभाईसँग मनमुटाब बढ्नेछ । प्रेममा मनमुटाब सिर्जना हुने हुनाले आफ्नो मानिससँग भेटमा कुरा गर्दा ख्याल गर्नुहोला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । कुनै पनि विवाद तथा अदालती पक्रियामा सामेल नहुनुहोला तपाईको पक्षमा निर्णय नआउन सक्छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- पहिले गरेका कामबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धीहरु हार खानेछन् । परिवारका साथ रमाईलो वातावरण तथा हासखेलमा समय बित्नेछ । पढाईलेखाइमा थोरै समय दिदा पनि उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्न सकनेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) :- राजनीति तथा कल्याणकारी कामबाट समाजबाट नाम तथा दाम कमाउन सकिनेछ । पढाईलेखाईमा अरुभन्दा एक कदम अगाडी बढी नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्न सकिनेछ भने जीवनसाथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) :- विदेशमा भूमिमा बसेर काम वा अध्ययन गर्नेरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ । क्षमता प्रदशन गरेर नाम तथा दाम दुबै कमाउन सकिनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडी छोडेर अग्रपंतिमा आउन सकिनेछ सुख दुःखमा साथ दिनेहरु प्रशस्त भेटिनेछन् । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) :- बुवाको धन परिचालन गरी लाभ लिन सकिनेछ । दाजुभाईको सहयोगले सवारीसाधन जोड्न सकिनेछ भने प्रेम तथा मित्रतामा आत्मियताको विकास हुनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जाने हुनाले अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपाईँको नाम आउनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाई वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) :- शरिरमा घाउ,खटिरा तथा चोटपटकको भए रहनेछ । श्वासप्रश्वास तथा छाती सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आफन्तसँगको लेनदेन कारोबारले शत्रुत्रा बढ्नेछ । मायाप्रेममा सामान्य मनमुटाव बढ्ने तथा श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा उतार चढाब बढ्नेछ । समाजसेवा तथा राजनीतिमा जनताको साथ नपाईने हुँदा पद प्राप्तीको योग टरेर जानेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) :- समयले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले राम्रा तथा परिणाममूखि काम गर्न सकिनेछ । धर्म तथा धर्म विस्तारको लागी समय दिनु पर्नेछ भने सस्कार परिवर्तनमा तपाईको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईको उच्च स्तरको सहभागिता रहनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) :- कुटुम्ब तथा आफन्तसँगको आर्थिक कारोबारमा मिलाउदै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा ध्यान जानेछ भने कार्यक्षेत्रमा राम्रा काम गर्न सकिनेछ । पुराना समस्याहरु हल भएर जानेछन् । अध्ययन तथा कामको लागी यात्राकोे योग रहेकोछ । आफन्त तथा दिदिबहिनीबाट तपाईको कामका सहयोग पाईनेछ । उपहार प्राप्तीको योगलाई नकार्न सकिदैन ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- टीम निर्माण गरी काम गरिएपनि एक अर्काको बिचार नमिल्दा केही दिनको लागी काम बन्द हुनेछ । महिला मित्र तथा बिपरित लिङगसँग पनि मतभेत देखिने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । भौतिक सम्पती तथा सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला बढि नै उत्साहित हुँदा नराम्रा घट्नाहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । व्यवसायिक यात्रा हुने भएपनि कष्ट कर नहोला भन्न सकिन्न । मनमा बेचैनले गतिलो डेरा जमाउनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) :- हुलमुल तथा विवादित बिषयमा प्रबेश नगर्नु नै राम्रो रहेकोछ ,आज हुने कुनै पनि न्यायिक निर्णय तपाईको पक्षमा हुने छैनन् । रोग,ऋण तथा संकटको सामना गर्नु पर्दा मानशिक तनाब बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा आर्थिक अवस्था नाजुक हुनेछ । पढ्ने लेख्ने कामहरु थाति नै रहनेछन् । आफन्त तथा मावली पक्षसँग बिवाद बढ्ने योग रहेको छ ध्यान दिनुहोला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) :- अध्ययनमा प्रशस्त समय दिन सकिनेछ भने नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । तपाईको ईमान्दारिताको कदर सबैले गर्नेछन् । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । अप्ठ्याराे तथा असजिला परिस्थितिलाई सहजै बुद्धिमतापुर्वक निराकरण गर्न सकिनेछ । प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा उपाहार प्राप्तीको योग रहेको छ । सन्तान तथा आफन्तबाट सहयोग रहने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ असार ०६ गते आइतबारदेखी असार १२ गते शनिबारसम्म ] १२ घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? १२ घण्टा पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने ४० मिनेट पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए ४१ मिनेट पहिले
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु ५० मिनेट पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने ५४ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी ५४ मिनेट पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै ५७ मिनेट पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी ६० मिनेट पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा १ घण्टा पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध १ घण्टा पहिले
मेलम्ची–हेलम्बु जोड्ने मोटर बाटो निर्माण जारी १ घण्टा पहिले
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा बाढीपीडितहरुका लागि राहत सामाग्री हस्तान्तरण १ घण्टा पहिले
उपत्यकामा निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनकाे तयारी २ घण्टा पहिले
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सभाले पारित गर्यो ८ दशमलव ४२ प्रतिशत लाभांश २ घण्टा पहिले
निर्धारित समयमा पनि सकिएन खानेपानी आयोजना २ घण्टा पहिले
कांग्रेसद्वारा पूर्वराज्यमन्त्री विष्टको निधनप्रति दुःख व्यक्त ३ घण्टा पहिले
सुनको भाउ तोलामा ८ सयले घट्याे ४ घण्टा पहिले
दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अक्सिजन प्लान्ट नल्याउने आपूर्तिकर्ता कारबाहीमा ८ घण्टा पहिले
राहत सामग्री पुर्‍याउने होड : दुर्गम हेलम्बुमा भन्दा सुगम मेलम्चीमा केन्द्रित ! ९ घण्टा पहिले
प्राचीन शिवालय सिद्धनाथ महादेव मन्दिर अस्तित्वको सङ्कटमा ७ घण्टा पहिले
रुपा सुनारलाई कोठा नदिने घरबेटी प्रहरी नियन्त्रणमा ४ घण्टा पहिले
पहिरो खस्दा महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध, सवारीसाधन ठप्प २४ घण्टा पहिले
युरोकप फुटबलमा पोर्चुगलमाथि जर्मनीको सानदार जित १८ घण्टा पहिले
नेपाल भाषा अनिवार्य अध्यापन गराउन माग ५ दिन पहिले
उद्धार र राहतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आग्रह ३ दिन पहिले
प्रदेश सरकारको बजेटमा यसपालि घुमौँ कर्णालीको गुरुयोजना ४ दिन पहिले
पूजा र श्वेताले सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितहरुलाई सहयोग वितरण गर्ने ३ दिन पहिले
निरन्तरको वर्षाका कारण बागलुङमा ४१ घर परिवार विस्थापित २ दिन पहिले
तेजाब प्रहार गर्ने दोषीमाथि कारवाहीको लागि पहल गर्ने ४ दिन पहिले
आजदेखि नबिल बैंकको बैकिङ सेवा बन्द हुने २ दिन पहिले
आज पनि केही नदीहरुमा आकस्मिक बाढी आउने सम्भावना ३ दिन पहिले
बन्दाबन्दीको समयमा लाग्ने कर छुटर जरिवाना मिनाहा गर्न माग ३ हप्ता पहिले
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ओली पक्षका ७ सांसद निलम्बनमा ६ दिन पहिले
आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जुटे स्थानीय तह १ हप्ता पहिले
गत मंसिरदेखि छाङ्गरुवासी सञ्चार सुविधाबाट बञ्चित ३ हप्ता पहिले
लकडाउनले खेलाडी शिवानीको दैनिकी नै परिर्वतन ४ हप्ता पहिले
सिंहदरबारमा विपक्षी गठबन्धन सांसदहरूको हस्ताक्षर ४ हप्ता पहिले
ओलीको छटपटीभित्र लुकेको रहस्य र एकता बचाउ रणनीति ३ हप्ता पहिले
पत्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक : सञ्चारमन्त्री ४ हप्ता पहिले
दक्षिण–पूर्वी एशियाली राष्ट्र कोभिड नियन्त्रण गर्न एकजुट १ वर्ष पहिले
इन्द्रजितको स्वर र सुरेशको संगीतमाजुनमा हेरूँ तिमीलाई ८ महिना पहिले
सुन्दरी समिक्षाको पवित्र माया आलिसाले खोसिन्, ह्याण्डसम आकाश प्रेममा असफल ६ महिना पहिले
अमेरिकाद्वारा इरान विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा ९ महिना पहिले